Arylọ ọrụ Rotary kiln | China Rotary n'ekwú ọkụ Manufacturers, Suppliers
Juda kiln -200T / D 3 ngwaahịa ...
Igwe ọkụ nke Juda -300T / D productio ...
Jude kiln - 100 tọn / ...
Juda Kiln-Cross ngalaba nke ...
Juda Rotary Kiln - 600t / d × 2 usoro ntinye- oru EPC
Nchịkọta oru na oke nyocha gbasara atụmatụ mkpokọta lime, a na-ezube ya iji wuo ahịrị mmepụta lime abụọ na-arụ ọrụ, nke ọ bụla na-eji 600 tọn arụ ọrụ kwa ụbọchị. Dabere na ihe ndị a chọrọ, a ga-ewu otu ite ọkụ na-arụ ọrụ nke 600t / d na nke mbụ, a ga-ewu onye ọzọ nwere otu ihe na mpaghara nke abụọ, mechaa mepụta usoro mmepụta nke 2 * 600t / d rotary kiln. Dabere na ihe ndị biddi chọrọ ...
Juda Rotary Kiln-600 tọn kwa ụbọchị x 1 usoro ntinye-EPC oru ngo
EPC Spepe Sistemụ ihe eji arụ ọrụ a (1) Sistemụ simenti na-anata sistemụ (nchekwa na nyocha, nchekwa ihe nchekwa na njem) nchekwa ngwaahịa na njem, ndinuak, screening na mmepụta usoro (4) Akpụkpọ anụ uzuzu usoro (5) Rotary n'ekwú ọkụ iyuzucha na ájá mwepụ usoro (6) Akpaka akara usoro Description nke oru ngo a) Ikike nke ngwaọrụ st ...
Usoro Rotary Kiln-preheating nke Juda
Nri na ihapu usoro 1.Limestone raw material storage yard ~ 6500t. A na-enyocha ihe eji arụ ọrụ site na nnukwu ihu igwe jijiji; a na-enyefe nri ahụ site na nnukwu ebu belt. 2.Round silo eji maka okokụre ngwaahịa, 2 10-50mm okokụre ngwaahịa silo, onye ọ bụla silo na nchekwa olu nke banyere 1000t; 1 okokụre ngwaahịa silo erughị 3mm, nchekwa olu bụ banyere 200t. Wayo na ọka ọka nke 10-50mm na-ebuga na ígwè osisi site na ụgbọ ala; wayo na gr ...
Kiln na mmanụ ọkụ Isi nke calcination usoro Nke a haziri na-ahọrọ a rotary n'ekwú ọkụ na a vetikal preheater na ngwa nju oyi, na-akwa limestone preheating okpomọkụ, na vetikal preheater nwere ike ibu elu iyuzucha gas okpomọkụ, nke nwere ike ime ka na nkume nzu ahụ na-enwe ụfọdụ ire ere na preheater . Ya mere oriri okpomọkụ dị ala karịa ụdị ndị ọzọ nke rotary kiln. Calcined vatieties ifịk wayo Size nke rotary n'ekwú ọkụ Φ4.0m × 60m ibu 2 edoghi Daily mmepụta nke ọ bụla n'ekwú ọkụ ≥600t ...
Ihe mejupụtara na njirimara Igwe oku na-agbanwe agbanwe nwere cylinder, ngwaọrụ na-akwado ya, ngwaọrụ nnyefe, akụrụngwa na-ejigide hydraulic, ọdụ oku na isi mkpuchi ọkụ. Igwe ozu ahụ na-adabere na mkpọda 3.5% site na ntanetị. Ejiri 2 set nke ngwaọrụ ndị na-akwado ya, na-akwado igwe na-agba mmiri bụ mmanụ a na-etinye mmanụ mmanụ mmanụ. Enwekwara wiil na-ejide hydraulic n'akụkụ nnukwu mgbanaka gia. A na-ebugharị ozu ahụ site na frequenc na-agbanwe agbanwe ...
Juda Rotary Kiln-Pulverized Coal System
Pulverized Coal System Sistemụ ọkụ na-eji ọkụ gas-gwakọtara ọkụ, nke nwere ike iji ọzọ ma ọ bụ n'otu oge jiri mmanụ ọkụ abụọ, ma n'otu oge ahụ nwere ike ime ka ọkụ na-enwu ọkụ na ọkụ ọkụ. Iji mezuo ihe ndị achọrọ maka oke dị ka nha mkpụrụ ọka na ọnụọgụ na usoro nke limezu lime na ọkụ na-agbanwe agbanwe, ọrụ a na-emepụta ọdụ ntụ ntụ. Dị ka ogo nke raw coal nyere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na c ...
Juda Rotary Kiln-Environmental Protection system
A na-eziga nkọwa dị mkpirikpi banyere usoro mmepụta usoro ọka ọka ruru eru na 1 # rotary kiln site na nnukwu ebu belt, na-agbanye n'ime silo nke 1 # rotary kiln preheater site na onye na-ekesa ụzọ atọ, wee kesaa limestone ahụ veethe preheater site na pusi, ma ọ bụ ebutu ya na eriri 2 #, bufee ya na silo nke 2 # rotary kiln, wee kesaa nzu nzu na preheater kwụ ọtọ site na ọwa ahụ. Mgbe nzu nzu batara pr ...
Usoro Rotary Kiln-Nchekwa nke Juda
Ihe nhazi usoro 1) Emepụtara ikike imepụta ọkụ na-agbanwe agbanwe: 600t / d. 2) Ọnwụ nke nchekwa limestone na nyocha: 1% 3) Nri ihe oriri nke rotary: 1.79t limestone / t quicklime 4) Maka ihe onwunwe 25-50mm, ọdịnaya nke <25mm ekwesịghị karịa 5% 5) Nchekwa na njem ọnwụ ọnụego nke okokụre ngwaahịa screening: 1% 6) Workingbọchị ọrụ nke n'ekwú ọkụ: 333 ụbọchị Na-arụ ọrụ usoro mụ NO. Item Okwu ụbọchị / Afọ Work team / Day Work hours / Team 1 Ra ...
Ogige Industriallọ Ọrụ, Linyi Economic Development Mpaghara, Shandong mpaghara, China
Onye njikwa ahia: Ella + 8615866201119 Nka na ụzụ: Allen +8613953913090
Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Ime Calcium hydroxide, Calcium Hydroxide Ime, Calcium hydroxide akụrụngwa, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide,